Shina namboarina manokana M10 ho an'ny mpanamboatra fanaka - Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd.
Home > Fitaovana fanaka plastika > Tongony azo ovaina > M10 manamboatra tongotra ho an'ny fanaka
Ny tongotra azo ovaina amin'ny fanaka, antsoina koa hoe pads amin'ny tongotra, dia ampiasao visy hampifandray ny fanambanin'ny fanaka (latabatra, seza, dabilio) hisorohana ny gorodona tsy hitondra, hampihena ny tabataba ary hampiakatra ny haavon'ny fanaka. tanjona lehibe): lalimoara / tongotry ny kabinetra, sns. mety amin'ny tranga maro, talantalana birao, sns. Mila tongotra azo ovaina ianao mba hamonjy ny tabataba ateraky ny fanambanin'ny fanaka isan'andro tsy misy ondana rehefa mihetsika izy, ary afaka manakana ny gorodona tsy hitafy koa ary avelao hampiasa ny fanakao Fampirantiana asa-tanana: fanaovana asa-tanana mahavariana sy mahavariana, fanariana kofehy, halaviran-tseraky ny fanamiana ary fisehoana kanto, asa-tanana.
Inona avy ireo tongotra fanaka azo ovaina?
Ny tongotra azo ovaina amin'ny fanaka, antsoina koa hoe pad amin'ny tongotra, dia ampiasao visy hampifandray ny fanambanin'ny fanaka (latabatra, seza, dabilio) hisorohana ny gorodona tsy hitafy, hampihena ny tabataba ary hampiakarana ny haavon'ny fanaka.
Sehatry ny fampiharana (vatana kely, tanjona lehibe): lalimoara / tongony kabinetra, sns.; mety amin'ny tranga maro, talantalana birao sns.
Mila tongotra azo ovaina ianao mba hamonjy ny tabataba ateraky ny fanambanin'ny fanaka isan'andro tsy misy ondana rehefa mihetsika izy, ary afaka manakana ny gorodona tsy hitafy ihany koa ary avelao hampiasa milamina kokoa ny fanakao.
Fampirantiana asa-tanana: asa tanana manaitra sy mahavariana, fanariana kofehy, halavirana faneriterena sy fisehoana kanto, asa-tanana.
[Anaran'ny vokatra]: Tongotra tongotra azo ovaina
[Orinasa fivarotana]:Guangdong, Sina
[Lafon'ny entana]: fingotra mainty / loko maro
[Fampiasana entana]:Fanaka tongotra azo ovaina amin'ny fanaka
Habe:M10 * L35
Endri-javatra vokatra:mahery sy milamina, mampihena ny tabataba, miaro ny tany tsy ho simba
Fampiasana vokatra:mety amin'ny vatan'ny latabatra, latabatra, seza sns.
Nahoana no mifidy antsika:
Varotra mivantana amin'ny orinasa, fanodinana namboarina
Fonosana sy fandefasananyM10 manamboatra tongotra ho an'ny fanaka
Izy io dia mandray kitapo plastika vita amin'ny artifisialy mandroso, ary manonta ny logo anao amin'ny polybag.
Misy fonosana namboarina.
Miankina amin'ny volanao aorian'ny fanamafisana ny baiko.
Sambo an-dranomasina na an-dranomasina araka ny nangatahinao.
Eny, mpanamboatra ao Shina izahay mandritra ny 10 taona mahery. Ny orinasa misy anay dia any amin'ny faritanin'i Guangdong.
2. Ahoana no fomba hitsidihako ny orinasa misy anao?
Pls ampahafantaro anay anay mialoha raha mikasa ny hitsidika ianao. Azonay aseho anao ny lalana na haka anao any amin'ny gara na seranam-piaramanidina.
3. Manome santionany maimaimpoana ve ianao?
Tsy olana izany, afaka mandefa ny santionany maimaimpoana ho an'ny referansa izahay.
4. Azonao atao ve ny manonta ny LOGO an'ny orinasanay amin'ny takelaka sy fonosana?
Ie. Azontsika ekena izany, ny fanampiana tsara indrindra dia azo atolotra ho an'ny mpanjifanay.
5. Rahoviana ianao no hanao fanaterana?
Hiankina amin'ny habetsahan'ny baikonao izany, ny habetsahana kely dia handefa ny entana in7-10days. Raha lehibe ny kaomandinao dia maharitra 10-15 andro.
6. Ahoana no ahafahanao mitazona fifandraisana tsara amin'ny orinasantsika any aoriana?
a. Mitazona ny kalitao sy ny vidin'ny fifaninanana izahay mba hahazoana antoka fa hahazo tombony ny mpanjifanay;
b. Izahay dia manaja ny mpanjifa rehetra amin'ny maha sakaizanay ary manao raharaham-barotra amin-kitsimpo ary manao namana amin'izy ireo, na avy aiza na avy aiza.
7. Raha mividy ny vokatrao izahay. Fa rehefa hita ny olana ara-kalitao, ahoana no hamahana izany?
Aorian'ny fanamafisana, raha tsy noho ny sehatra ivelany no mahatonga ny olana ara-kalitao dia hanome onitra ny mpanjifa izahay.
Hot Tags: M10 manamboatra tongotra ho an'ny fanaka, Sina, namboarina, mpanamboatra
M8 manamboatra tongotra ho an'ny fanaka
M6 manamboatra tongotra ho an'ny fanaka
Fitaovana fanitsiana plastika azo havaozina amin'ny fanaka
Fitaovana tongotra azo ovaina azo esorina